Izay tokony hatao In Eoropa Tamin'ny volana Febroary, Travel Tips | Save A Train
Home > Travel Europe > Izay tokony hatao In Eoropa Tamin'ny volana Febroary, Travel Tips
Mpanao dia lavitra, izay loha tsy mahazo manao Eoropa tamin'ny volana Febroary dia afaka mahazo ny sasany amin'ny kaontinanta hitan'ny vahoaka ny tsara indrindra-maimaim-poana, anisan'izany ny lehibe manintona toy ny Spanish Steps sy ny Zaridaina Tivoli.
Febroary dia zavatra iray breather: hanitra toerana be atao eo amin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra sy ny spring breakers.
Raha ny tanjona dia ny hahazo Tan, Dia Eoropa tamin'ny Febroary dia tsy handeha handringana azy. Raha ny hiaina ireo no tena tanjonao manan-tantara toerana eto an-tany, avy eo fotoana boky vao nandeha lamasinina!
raha ny vanin-taona mafana hoe tsy mibahan-toerana akanjo, sarotra ny miady hevitra amin'ny aotra vahoaka sy ny vidiny mora kokoa amin'ny zava-drehetra! Ireo tsy mampino traikefa tsy hain'ny handeha ny (na mahary mandritra ny fotoana Travel tampon'isan'ny). Ity ny antony tokony nandeha tany Eoropa tamin'ny volana Febroary.
Eoropa in Febroary: Roma, Italia
Roma dia fantatra amin'ny hoards ny zaka vahoaka. Afa-tsy tamin'ny Febroary mazava ho azy. Febroary dia vanim-potoana ambany tany Roma, ary afaka manantena ny hanana be dia be ny toerana ambony ny tenanao. Tsara kokoa, be dia be ny toerana an-tampony dia FREE over Febroary. Eo amin'ny Alahady voalohany Febroary, panjakana sy ny tranom-bakoka ireo toerana maimaim-poana ho an'ny rehetra. Anisan'izany ny archeological toerana toy ny Colisée, Forum, Palatine Hill, Bata avy ny Caracalla sy Ostia Antica; ary tranombakoka toy ny Borghese Gallery ary Palazzo Barberini.
Izay mitranga tany Roma tamin'ny Febroary
Misy be mitranga any Eoropa in Febroary indrindra fa tany Roma, afa-tsy ny maha-vanim-potoana ny eny. Ity ny lisitr'ireo zava-mitranga tany Roma tamin'ny Febroary.
Febroary 9, 2019 – Enina Firenena Rugby Italia V Wales amin'ny Stadio Olimpico, Roma 17:45
Febroary 11, 2019 – Izany dia fetim-pirenena Inside Vatican City, toy izany ny tsingerintaonan'ny ny fototry ny Vatican City. The Vatican Museums dia mihidy anio.
Febroary 14, 2019 – St. Fetin'ny mpifankatia
Febroary 24, 2019 – Enina Firenena Rugby Italia V Irlandy sy Stadio Olimpico, Roma 16:00
March 1, 2019 – Fetibe, OK ara-teknika izany ao March ity taona ity, fa rehetra tia Fetibe, koa manantena hahita ankizy miakanjo sy confetti dia atsipy alohan'ny volana martsa aza 1
tamin'ny Febroary 6, West Coasters manana antony boky vaovao iray nankany amin'ny Mandrakizay City: Norvejiana Air ny fandefasana ny mandrakizay voalohany mivantana lalana avy any Oakland ho any Roma, amin'ny sidina ho ambany dia ambany toy ny $200 fomba tsirairay. Tsy tokony hamela toerana ho an'ny fandaniana fanampiny rehefa trano nitoerany, toy izany Diniho ny lehibe, zavakanto feno tariny amin'ny Hotel de Russie, iray nanan-tantara tamin'ny fananan'ny tsy miankina terraced zaridaina sy ny mpamono tsara toerana manodidina ny zorony avy ny Espaniola Dingana.
Eoropa in Febroary: Portiogaly
Manana teny iray ho anareo, raha ny hevitrao Eoropa tamin'ny Febroary. Fetibe.
Portiogaly dia fantatra amin'ny faritra sy ny mahatalanjona divay tsara tarehy tanàna amoron-dranomasina, kanefa misy zavatra maro izay tsy azo ampitahaina amin'ny Carnaval! Efatra-andro fankalazana mahazo mandeha ny herinandro rehefa Fetin'ny mpifankatia ary ahitana matso, pageants, ary ny fampisehoana isan-karazany.
Ny Fetibe fetiben'ny in Madeira dia iray amin'ireo faritra liveliest fety. Funchal tanàna mifoha amin'ny zoma maraina ny feon'ny varahina fatorana sy ny fetibe matso mitondra ny vazivazy tsara ho an'ny rehetra ny faritra afovoan-tanànan'i. Izany mitohy any an-paharivan'ny andro miaraka amin'ny fampisehoana sy rindran-kira tao amin'ny Praça manao Municipio nandritra ny dimy andro misesy. Miresaha momba ny antoko!
Asabotsy alina no toerana tena aza. Ny asa lehibe mitsingevana! After following their traditional lalana ny alalan 'ny tanàna, Izy ireo hifantoka amin'ny Town Square. Izany no toerana misy hira sy ny dihy be amin'ny majika rivo-piainana ny mozika sy ny firavoravoana feno fietrena.
Ary tamin'ny andro mihitsy ny Fetibe (Shrove Talata), Funchal lasa ny hita vatana mahafinaritra! Efa andro tokony ny malaza matso. Nandritra izany fotoana izany, eny an-dalamben'i Funchal dia voaravaka tandindon'ny jiro sy safotry amin'ny fototra mozika Niresaka ny Fetibe fe-potoana.
Eoropa in Febroary: Tuscany, Italia
Tuscany foana hevitra tsara, ary tamin'ity volana ity, Castiglion andramena do Bosco - ny fananana nankafizin'ny olona amin'ny taonjato faha-17-farmhouses izay naverina tamin'ny laoniny toy ny lafo vidy raitra - mandeha ho an'ny rehetra ny zava-nitranga lehibe indrindra faritra. Montalcino ny ambony winemakers niangona ny fanao isan-taona Benvenuto Brunello festival (Febroary 15faha ny 19faha, 2019,).
Ny efatra andro ny divay-Fest - sa tokony hoe: hetsika - tsy manam-paharoa hahita fahafahana maro Montalcino miampy ny roan-jato mpamokatra nijoro takolany ho jowl ny Alahady tsara indrindra. Raha ny hevitrao no mety ho tianao ny volo fanendrena amin'ny andro rahateo tena tokony handinika famandrihana ankehitriny, ary toy izany koa mandeha ho trano fandraisam-bahiny.
Ny vao nitarina, ary nohavaozina Boutique Hotel, Monteverdi, mitoetra ao anatin'ny Unesco World Lova faritr'i Val d'Orcia, Tuscany. Aiza maitso mavana tanim-boaloboka bodofotsy ny havoana. Every February, oenophiles dia voasarika hanatona an'io bucolic anisan'ny Italia. Izy ireo mankalaza ny famoronana ny farany Brunello sy Brunello Riserva vintages. Vahoaka tampon-kavoana hanangonanao ny tanàna Montalcino ho an'ny Benvenuto Brunello festival. Saingy tamin'ity taona ity, Monteverdi dia fampiantranoana ny fankalazana manokana, fanomezana akaiky kokoa hahatakatra ny divay tsara dia tsara amin'io faritra io dia fantatra amin'ny amin'ny notsongain'ilay nandehanany ny divay ny zavaboary.
Rehefa mandeha eny ny fetibe tamin'ny Febroary 15faha ny 19faha, 2019, ianao nandeha nitarika ny lalana, avy amin'ny fijinjana sy ny vinting mba nanandrana sy pairing, ny fandraisana ny lova sy ny tontolo izay mamaritra izany divay manokana.
Verona ho any Florence Lamasinina
Te-hahafantatra ny fomba tsara indrindra mba hahazoana na dia iray ihany amin'ireo toerana ao Eoropa tamin'ny Febroary? Save A Train mazava ho azy! Lohany amin'ny eo amin 'ny tranonkala mba hahita ny tsara indrindra vidin-javatra, in segondra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-february-travel-tips/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / izany / en na / nl sy ny maro hafa fiteny.
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe